हाम्रा विद्यार्थीहरू - एमआईएममा कम्प्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम भेट्नुहोस्
क्लिक गर्नुहोस् वा रोल गर्नुहोस् BLUE डटहरू प्रशंसापत्र प्रकट गर्न वा सुन्तला भिडीयो हेर्न भिडियोहरू।
"मैले एमएममा सिकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ट्रांजिन्डलन्ट मेटिटिज प्रविधी थियो। यसले वास्तवमा तनाव कम गर्न र दिमाग खाली गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, यो अभ्यास गर्न धेरै सजिलो छ। "
"पाठ्यक्रमहरू धेरै व्यावहारिक छन्। विद्यार्थीहरूले बजारमा प्रयोग गर्ने अधिकांश समय प्रविधिहरू र ढाँचा प्रयोग गर्छन्, जसले इन्टर्नशिपको लागि राम्रो तयारी गर्दछ। ब्लक प्रणाली महत्त्वपूर्ण छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले भाषा र संस्कृति अनुकूलन जस्ता विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्छन्, त्यसैले प्रति महिना एक कोर्स गरेर एक चोटीमा धेरै पाठ्यक्रमहरू हटाउने तनावलाई कम गर्दछ। "
"मेरो श्रीमान र म ब्राजिलबाट अमेरिकाबाट आएका हाम्रो ज्ञान र क्यारियर विस्तार गर्न। MUM उत्तम छनौट थियो! कर्मचारी धेरै दयालु छन्। विश्वविद्यालयले हाम्रो कल्याण र सफलताको बारेमा एक दिन बाट हेरेको छ। पाठ्यक्रमहरू र संकाय उत्कृष्ट छन्। हामी व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकासको लागि MUM लाई अत्यधिक सिफारिस गर्छौं। "
"यहाँ प्रोफेसरहरू साँच्चै विद्यार्थीहरूको हेरविचार गर्छन्। सबै संकायमा अमेरिकी नौकरी बजारमा सफ्टवेयर इन्जिनियर्सको रूपमा काम गर्ने लामो इतिहास छ। "
"MUM, म मेरो MOM को रूपमा 'MUM' कल गर्न चाहन्छु। यहाँ मलाई महसुस छैन कि म मेरो भारतीय परिवारबाट 8600 किलोमिटर टाढा छु। साधारण शब्दहरूमा, एमएममा तपाई ऊर्जावान व्यक्ति, शान्त वातावरण, स्वस्थ खाना, कम प्रारम्भिक भुक्तानी, हेरविचार र ज्ञानयोग्य संकाय भेट्टाउने एक अनौठो विश्वविद्यालय हो जुन मैले अस्तित्वमा सोचेको छैन। "
"मेरो देश युगांडा छोडेको निर्णय मैले आफ्नो जीवनमा गरेको सबै भन्दा कठिन निर्णयहरूमध्ये एक थियो। मेरो परिवार छोडेर राम्रो काम गर्नु पर्थ्यो साँच्चै गाह्रो थियो।
मैले यो लेखेको छु, मैले मेरो सम्पूर्ण क्याम्पसमा पाठ्यक्रम कार्य सफलतापूर्वक पूरा गरेको छु र चाँडै मेरो इन्टरनेटशिप सुरु हुनेछ। मेरो कुनै शब्द छैन कि मैले MUM मा यस छोटो समयमा मैले कति सिकेको छु।
प्रोफेसरहरू महान छन् र पाठ्यक्रम नौकरी बजारको लागि तयार बनाउन पाठ्यक्रम तयारीमा छ। मेरो परिवारले तीन महिनापछि मलाई सामेल गर्यो, र हामी फेरीफिल्डमा खुसीसाथ र शान्त रहँदै छौं। हाम्रो भविष्य पहिले भन्दा भन्दा उज्ज्वल देखिन्छ! हामी धेरै खुसी छौं हामी MUM सामेल हुन निर्णय गरे। म धेरै सिफारिस गर्दछु। "
इन्टर्नशिप विद्यार्थी, फ्लोरिडा
"महाराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रबंधन सबै भन्दा माथिको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम, शीर्ष संकाय,2वर्ष सम्म व्यावहारिक प्रशिक्षण भुक्तानी प्रदान गर्दछ, र सबै केहि माथि, TM प्रविधि सिक्न को अवसर।"
"टीएम एक राम्रो आदत हो, किनकि यो तपाइँको दिमागमा अभ्यास गर्ने अभ्यास गर्दछ। कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन गर्दै अन्य पाठ्यक्रमहरू अध्ययन गर्दै जस्तै होइन। कहिलेकाहीँ हामी2वा3दिन भन्दा बढीका लागि बगहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्दछ, र तपाइँले फोकस गुमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं फिर्ता बस्न र केहि समयको लागि मनन गर्ने समय लिनुहुन्छ भने, तपाईंको निराशा दूर हुनेछ, र तपाईंको तनाव कम हुनेछ, र तपाइँ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, म भन्न चाहन्छु कि टीएम प्रविधी कम्प्यूटर प्रोफेशनल कार्यक्रम संग जान्छ। "
MUM विविधता मनाउँछ
"एमएम एक बहु-सांस्कृतिक वातावरण हो जहाँ हामी विविधता मनाउँदछौं। दुई हप्ता पहिले यो "इथियोपिया नयाँ वर्ष 2011," र MUM हामीलाई बजेट दिए र सबैलाई जलाउनु पर्छ। हामीले इन्जेराको साथ इथियोपिया भोजन तयार पार्यौं र यो इथियोपियन नृत्य शो-विद्यार्थीहरू विभिन्न राष्ट्रीयताका साथ आए र हामीसँग डान्सियो। त्यसोभए, तपाईले MUM बाट एक चीज विविधताको उत्सव हो। "
"यो घर बाट यो दूर आउन एक प्रमुख निर्णय थियो। हामी जस्तै मानिसहरू सीमित स्रोतहरू छन् तर ठूला सपनाहरू, हामी पाउन सक्छौं जस्तो धेरै मद्दत चाहिन्छ। विश्वविद्यालयले तपाईंको आईटी क्यारियर निर्माण गर्न सम्पूर्ण संसारमा कुनै पनि विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो सहयोग प्रदान गर्दछ।
एमएमले मलाई मात्र राम्रो क्यारियरको लागि ढोका दिएको छ, तर यसले मलाई मेरो आमाबाबुलाई बोझ बोकेर मेरो आफ्नै काम गर्न मद्दत गर्यो। यो एक दयालु हो। मेरो सपना सत्य आउँदैछ। तपाईंको पनि। "
"जब मेरो लागी मैले सोच्दा समयको बारेमा सोच्दै थिएँ, म यो पक्का थिएँ कि म यहाँ हुन चाहन्छु किनभने म वास्तवमा केहि फरक चाहान्छु, केहि नयाँ। म अब भन्न सक्छु कि मेरो कुनै अफसोस छैन। सबै मान्छे र केटीहरु को लागि वहाँ अझै पनि आवेदन को प्रक्रिया मा छ, म भन्न सक्छ कि यदि मलाई यो गर्न को लागि फेरि फेरि थियो, म अब अवसर को दरवाजा खोलो, सिर्फ यो स्लाइड नहीं हुनेछ।
“म इरानमा मेरो सफल क्यारियरमा भएको चीजलाई फिर्ता छोड्दा चिन्ता गर्दै थिएँ, तर एमएस कार्यक्रम यसको लागि उपयोगी थियो। यसले मेरो क्यारियरलाई अर्को तहमा पुर्‍यायो। अहिले मसँग धेरै तलब इन्टर्नशिप छ। ”
"एमएम एक अद्वितीय अनुभव भएको छ जसले मलाई मेरो ज्ञान सुधार गरी अविश्वसनीय व्यावसायिक वृद्धि दिएको छ, र मलाई काम गर्न र संयुक्त राज्य अमेरिका आईटी बजारमा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। मेरो क्यारियर एक नयाँ नयाँ स्तर पुग्यो।
"म एमएममा प्रवेश गरेको कम्प्यूटर प्रोफेसर मास्टर प्रोग्रामले तपाईंलाई इन्टरप्राइश प्राप्त गर्न कम्तीमा सुरुवात शुल्क तिर्न अनुमति दिन्छ, र केवल कक्षामा 8-9 महिना पछि, जो अमेरिकी कार्यकर्तामा बहुमूल्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव थप्न सक्छ। तपाईंको पुन: सुरू गर्नुहोस्। यो धेरै राम्रो छ कि MUM ले मेरो सपनाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गरिरहेको छ। "
"मैले MUM मा सरल मानसिक प्रविधि सिकेको छु, जुन मैले साँच्चै सान फ्रान्सिस्कोमा आउँदा सराहना गरेको छु। जब मेरो वास्तविक जीवन सुरु भयो, र मेरो जिम्मेवारीहरू संग्रहित भए, मलाई मेरो दैनिक तालिकामा शान्त क्षण हुन आवश्यक छ। "
"शहरको सबै अराजकता भित्र र मेरो तेज गतिमा जीवन, मेरो 20-मिनेट मननहरू शान्ति, जीवन, र शान्तताका उत्कृष्ट क्षणहरू थिए। म आफैलाई र मेरो दिमागलाई प्रतिदिन दुई पटक पुन: उत्साहित गर्न सक्दिन, र ती बीस मिनेटले मेरो दिनचर्या - खेलकुद र काम गरिरहँदा धेरै ऊर्जा दिए। यसले मलाई यति रचनात्मक बनायो र मेरो सोचलाई विशाल बनायो। मलाई लाग्छ कि ट्रांस्जिन्टल ध्यान प्रविधि मैले मेरो जीवनमा सिकेको सबैभन्दा राम्रो चीज थियो, र अब मैले यसको प्रभाव धेरै अधिक देख्छु। "
"तनाव सॉफ्टवेयर सफ्टवेयरमा एक प्रमुख खेलाडी हो - म्यादले समय समयमा समाप्त गर्न अस्थिर, गुस्सा र हतोत्साहित बनाउँछ। टीएम को सहयोग संग, म अधिक ध्यान केंद्रित र शांत समय को अधिकांश, र एक उच्च प्रदर्शन। मेरो कम्पनीमा मानिसहरूले मलाई गोप्य बारे सोधे, त्यसैले मैले तिनीहरूलाई टीएमको लेख लेखे। "
"Fairfield मा एक सुन्दर, शान्त वातावरण संग सुन्दर सुन्दरता छ, र यहाँ मानिसहरू न्यानो र रमाइलो हुन्छन्। यो समुदाय भयानक छ। मैले विभिन्न देशका साथीहरुसँग मित्र बनाएको छु र यहाँ माया गरेर छु। म छोड्छु जब म छोड्छु। "
"म मनमा एक गोल संग एमआईएस सामेल - कम्प्यूटर साइंस मा एमएस डिग्री, र राज्य को बैंकिंग क्षेत्र मा केहि अनुभव। मैले आठ महिनाको कडा मेहनत गरेपछि मेरो अन-क्याम्पस अध्ययन पूरा गरें, र कान्सासमा सीएससीमा एक वरिष्ठ सफ्टवेयर विकासक व्यावसायिक विश्लेषकको रूपमा काम गरें। म अझै पनि WIC बैंकिंग टीम संग काम गर्दै छु।
म अत्यन्त कृतज्ञ हुँु मैले मेरो कक्षाहरु, र भित्री व्यावहारिक प्रशिक्षण (सीपीटी) स्थिति मार्फत पनि धेरै सिकेको छु। MUM ले मलाई सिकाउनुभयो के कसैले पनि मलाई सम्भवतः मलाई सिखाएको हुन सक्छ - प्रेम र एप्लाइड गणितमा एक स्थापित शाखाको रूपमा कम्प्युटर साइन्सको सम्मान।
एमएममा सामेल भएको म धेरै गर्व हुन्छु र यो अचम्मको परिवारको अंश बन्छु। म यी अद्भुत मानिसहरूलाई मदत र सहयोगको साथ मेरो लक्ष्य हासिल गर्नमा गर्वमा पनि गर्थें। "
"मैले पहिले GRE परीक्षण लिनुभन्दा केही हप्ता एमएम बारे सुन्नुभयो। परीक्षा लिनु अघि मैले सोधें कि यदि मेरो जानकारी डेटाबेसमा प्रवेश गर्न चाहन्छ भने अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न। मैले अमेरिकामा विभिन्न संस्थाहरूबाट इमेलहरू प्राप्त गर्न थाले, र तिनीहरू मध्ये एकबाट बाहिरिन्छन्, किनभने यो मलाई स्नातकको डिग्री प्राप्त गर्न र मेरो देश भन्दा बाहिर काम गर्ने मौका प्रदान गर्यो - जुन त्यतिबेला मेरो लक्ष्यको2थिए जीवन मा।
पहिलोमा मैले सोधे कि यो सच हुनु राम्रो थियो (वित्तीय सहायताले यो अमेरिकामा सबैभन्दा किफायती स्नातक कार्यक्रमहरू मध्ये एक बनाउँछ), र त्यहाँ एक "पकड़" हुन सक्छ, तर वेबसाइट भ्रमण पछि मैले यो बुझें कि यो थियो एकदम सही अवसर, तीमध्ये एक जसले जीवनभर एकपटक आउँदछ, र तपाइँ भाग्न सक्दैनौं।
म केवल मेरो लक्ष्यों को2को पूरा गर्न मा सक्षम हुन को लागि, तर एक स्वस्थ आहार संग, मनन को लागि सीखने को विचार, र एक शांतिपूर्ण शहर मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा मेरो साहसिक पुरा तरिकाले जस्तै लगाइएको थियो।
"यदि तपाइँसँग सफल सफ्टवेयर इञ्जिनियरको सपना छ भने, MUM उत्तम तरिका हो।"
"म मेरो देशलाई माया गर्छु, र म्यांमारको सबै सफ्टवेयर विकासकर्ताहरू चाहेर म त्यस्ता फाइदाहरू र अवसरहरूको आनन्द उठाउन चाहन्छु जुन म MUM मा खुसी छु।"
"MUM मा ComPro कार्यक्रममा कम प्रारम्भिक वित्तीय आवश्यकता छ जुन 8 महिनाको अन्त्यमा परिसर अध्ययनको क्रममा सबै शिक्षा, आवास, जैविक भोजन र स्वास्थ्य बीमा लागत समावेश गर्दछ। बाकी इंटर्नशिप / पाठ्यक्रमिक व्यावहारिक प्रशिक्षण को समयमा एक ऋण को रूप मा भुक्तानी गरिन्छ, जसले हामीलाई एक आईटी उद्योग को उद्योग एक्सपोजर प्रदान गर्दछ।
पारदर्शी ध्यान को अभ्यास यहाँ हामिलाई हाम्रो अधिकतम क्षमता को आराम र अन्वेषण मा मदद गर्दछ। यी सबै फाइदाहरू संग, एमएम मेरो सपना सच्याउन मद्दत गर्दैछ। "
"माम मा पढाई आशीर्वाद थियो। मेरो भागमा कुनै अफसोस छैन। MUM एक अनोखी विश्वविद्यालय हो जसले तपाईंलाई न केवल पाठ्यक्रम (कम्प्यूटर साइंस) को टेक्निकल प्रकृति सिकाउँछ तर यसको पनि जीवनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति र तपाईंको सम्पूर्ण रूपमा।
वातावरण र संस्कृति परिसरमा फेयरफिल्डमा देखाइएको संस्कृति अद्भुत अनुकूल छ। यदि तपाइँ परिवर्तनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंको क्षितिज विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ भने MUM मा नामांकन तपाइँको चरणगत पत्थर हो।
एमआईएमको कम्प्यूटर साइन्स प्रोग्रामले तपाईंलाई अमेरिकामा यहाँ वास्तविक बजारमा उजागर गर्ने अवसर दिन्छ, यसले तपाईंलाई चुनौती र आशालाई जागरूकता र जीवनको सन्दर्भमा सुधार गर्न दिन्छ। "
"महाराष्ट्र विश्वविद्यालय प्रबंधन एक अलग प्रकार को एक विश्वविद्यालय हो जुन विद्यार्थीहरु को शैक्षिक र आध्यात्मिक विकास को बारे मा परवाह गर्दछ। मैले मेरो मास्टर डिग्रीमा भर्खरको प्रविधि र नेतृत्व विकासको बारेमा मेरो ज्ञान बढायो।
मैले सम्भावित विद्यार्थीहरूको लागि कम्प्यूटर साइन्स मास्टर डिग्रीको सिफारिस गर्दछु, जसले तिनीहरूलाई उद्योगको नेतृत्व गर्न र उनीहरूका सपनाहरू पछ्याउन मद्दत पुर्याउँदछ। "
"म खुशी छ कि मैले महर्षि विश्वविद्यालय मा नामांकन गर्ने निर्णय गरे। कार्यक्रम राम्रो तरिकाले संरचित छ, सफ्टवेयर विकास र व्यक्तिगत विकासमा फोकस गर्ने। पाठ्यक्रमहरू सिधै बजारमा प्रवेश गर्न एक तयार गर्नको लागि संगठित गरिएको छ, जिते पछि तपाईंले ओन-क्याम्पस पाठ्यक्रमहरूको 8-9 महिना समाप्त गर्नुहुनेछ।
मेरो इन्टरशिपशिप खोज सुरु गरेको दुई हप्ता भित्र मलाई भर्ती गरिएको थियो। मैले पनि मेरो ऋण दुई वर्ष भित्र भित्र तिर्न व्यवस्थित गरें, र अब म एक वरिष्ठ सफ्टवेयर ईन्जिनियर को रूप मा दुनिया को सबै भन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाहरु संग काम गर्छन। कम्पनी लगातार तीन वर्ष को लागि एक आईटी नियोक्ता को रूप मा स्थानित गरिएको छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ कि यस अवसरमा म कति ट्याप गर्न सक्षम छु। म आफ्नो साथी देशीहरूलाई यस कार्यक्रममा सामेल हुन प्रोत्साहन दिन्छु। "
"मेरो लामो समयका लक्ष्यहरू मध्ये एक विश्व सफ्टवेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतासँग एकदम बलियो सफ्टवेयर विकासकर्ता हुनुपर्दछ। केवल 8-9 महिनाको लागि अध्ययन गरेर, कम्प्यूटर प्रोफेशनल कार्यक्रमले तपाईंलाई विश्वभर कहीं पनि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिस्पर्धी किनारा प्रदान गर्दछ।
वातावरण र यसको मान्छे धेरै अनुकूल छ। यो अध्ययन गर्न सुरक्षित स्थान हो र, विशेष गरी यदि यो एक विदेशी संस्कृतिमा विभिन्न देशमा तपाइँको पहिलो अनुभव हो। "
"म तपाईंलाई यस कार्यक्रममा सामेल हुनको लागि प्रोत्साहन दिन्छु। यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा पढ्नको लागि यो उत्कृष्ट अवसर हो। मलाई अचम्मको जीवन, नौकरी, साथीहरू र अमेरिकी अनुभव छ जुन म तपाईंसँग साझेदारी गर्न चाहन्छु।
म आफैले गर्व गर्थें कि म थाईल्याण्डमा मेरो परिवारलाई समर्थन गर्न सक्छु। म तपाईंको खुशीलाई तपाईंसँग विस्तार गर्न चाहन्छु। महर्षीले भने, "हामी कम गर्छौं, र कम गर्छौ।" यो मेरो सत्य हो। मैले भर्खरै कम्प्युटरमा कम्प्युटर प्रोफेशनल कार्यक्रम अध्ययन गरेको छु, र अब मेरो अद्भुत क्यारियर छ।
मलाई आशा छ कि मेरो कथाले तपाईंलाई सुरू गर्न प्रेरणा दिन सक्छ। "
"मैले मास्टर्स विश्वविद्यालय मा ल्यान उच्च शिक्षा प्रशासन मा प्रशासन मा स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा गरे।
म सुझाव दिन्छु कि मेरो साथी टर्की नागरिकहरूले यो उदार अवसरमा एमआईएममा कम्प्यूटर साइन्स पढ्ने मौका पाउँछन्, र उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने सबैले मजा लिन सक्छन्। यो एक पटक एक पटक जीवनभर अवसर हो। मैले कसैलाई भेटिनँ, जसले आउन सक्ने छनौट र रिसर्च कम्प्युटर साइन्स यहाँ अध्ययन गर्दछ। "
मलाई तपाईंको एमएम अनुभव तपाईंसँग साझेदारी गर्न दिनुहोस्।
धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गरे पछि, मैले किन छोडेका कारण एमम कम्प्यूटर प्रोफेसर MSCS कार्यक्रम हुन्:
आज मेरो विश्व प्रसिद्ध कम्पनीमा इन्टर्नशिप छ जसले मलाई व्यावसायिक र व्यक्तिगत विकास गर्न मद्दत गर्दछ। निस्सन्देह, म एमएम मा प्राप्त ज्ञान, र मैले यहाँ गरेको अवसरहरू मेरो अपेक्षाहरु पार गरेको छ। यदि तपाईं आफ्नो कौशल सुधार गर्न र विश्व प्रमुख कम्पनीहरूमा काम गर्ने अवसर अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, MUM मा स्वागत छ। "
"MUM मा, उनि आफ्नो व्यक्तिगत विकास, साथ नै उत्कृष्ट शिक्षाविद्हरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। हामीले ट्रास्जिन्डन्ट्रल मेटिटिटी® टेक्निकल सिक्यौं, जुन तपाईंको दिमागलाई परिमार्जन गर्न र आफ्नो इन्द्रलाई शान्त पार्न महान उपकरण हो, त्यसैले तपाइँ कम्प्यूटर साइन्समा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। TM सँग धर्मसँग केही गर्न छैन। यसले मलाई बढी प्रोग्रामिङमा ध्यान दिइरहेको छ र अरु मेरो जीवनमा के गर्दछ।
म आशा गर्दछु कि तपाईं यो अनूठा अवसर लिन को लागी प्रबंधन को महाराष्ट्र विश्वविद्यालय मा आफ्नो मास्टर डिग्री को लागि अध्ययन गर्न हुनेछ। "
"यो अमेरिकी मास्टर डिग्री भन्दा अधिक छ। यो एक अमेरिकी मास्टर डिग्री हो र अमेरिकी कम्पनीको लागि काम गर्दै दुई वर्षको अनुभव हो। यसले तपाईंको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनेछ। एक इंटर्नशिप प्राप्त गर्नु भन्दा सजिलो छ, किनभने MUM अमेरिकामा धेरै आईटी कम्पनीहरूद्वारा मान्यता प्राप्त गरिएको छ यो आईटी बजार कहिल्यै अहिले भन्दा भन्दा राम्रो थियो। "
"यदि तपाईं अहिले सम्म कुनै पनि विकसित देशमा हुनुहुन्न भने, यो जीवित र सबैभन्दा विकसित देशमा काम गरेर विश्व अन्वेषण गर्ने एक राम्रो मौका हो। तपाईं व्यावहारिक टी प्रविधी संग शान्त र शान्त परिसरमा पढ्ने 8-9 महिनाको साथ सुरू गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई ज्ञान प्राप्त गर्न र अमेरिकी संस्कृतिसँग परिचित रहन मद्दत गर्नेछ ताकि तपाईं चुनौतीपूर्ण कामको वातावरणमा भाग लिन तयार हुनुहुन्छ। "
"कम्क कार्यक्रमको बारेमा मैले के मजा गरेँ कि प्रोफेसरहरू वास्तवमा प्रत्येक विद्यार्थीको सफलताको बारेमा हेरचाह गर्छन्। प्रत्येक पाठ्यक्रममा सिकाइएको छ आईटी उद्योगमा लागू हुने उत्तम अभ्यासहरू। "
"मेरो जीवनमा एउटा ठूलो र रोमाञ्चक अवसर थियो। म यहाँ अध्ययन गर्न मेरो निर्णयको लागि खुशी भएको छु।
जब तपाईं अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ तब कामको अनुभव पाउने CS मास्टर डिग्रीले मेरो जीवनमा दुई प्रमुख लक्ष्यहरू पूरा गर्यो। यसले मेरो क्यारियरमा फायदेमंद प्रभाव पारेको छ, र म विश्वास गर्छु कि यसले धेरै महान् अवसरहरू ल्याउनेछ। "
"आजकल, एक महिला को लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी र समाज र आफैले को लागि उपयोगी महसुस गर्नु पर्छ। म सबै महिला सफ्टवेयर डेवलपर्सहरू चाहान्छु जुन उनी रचनात्मक, विचारधाराहरू र सपनाहरू छन् भन्ने महसुस गर्छन्, तर आफ्नो प्रतिभा व्यक्त गर्ने उपयुक्त तरिकाहरू फेला पारेनन् - MUM तपाईं आफ्नो कौशलमा सबै भन्दा राम्रो महसुस गर्न सहयोग र ज्ञान पाउनुहुनेछ। र दक्षताहरू। "
"फेयरफील्डमा बस्ने एक मुस्लिम महिलाको रूपमा, मलाई लाग्छ कि मेरो वरपरका मानिसहरू मेरो र अरूलाई सम्मान गरिरहेका छन्" "तिनीहरूले मलाई एक को रूप मा व्यवहार गरे, यस तथ्य को बावजूद कि म मेरो स्कार्फ पहनें। मैले कहिल्यै दुर्व्यवहार गरेन। "
"यो एकदम शान्त र शान्त ठाउँ हो। विश्वविद्यालय बाहिर समुदाय पनि मित्रवत, सहयोगी र शान्त छ। तथ्य यो छ कि विश्वविद्यालयले जैविक भोजन तयार पार्छ त्यस्ता चीजहरू मध्ये एक हो जुन म फेरीफिल्डमा बस्न चाहन्छु। "
"म एक कम्पनी ईन्जिनियरिङ्को रूपमा मेरो इन्टरशपशिप गर्ने सबैभन्दा भाग्यशाली छु कि फॉर्च्यून पत्रिकाले" 100 बेस्ट कम्पनीको लागि कामका लागि "सूचीबद्ध गर्दछ। यो हेर्नु भएको छ कि कक्षामा मैले के सिकेको कुराले मलाई मद्दत गर्दछ र मजा लिनुहोस् काम! म सधैं यस शिक्षा को लागि र संसार भर देखि धेरै अन्य को पेशकश के लिए एम्यू कम्प्यूटर विज्ञान संकाय और प्रशासन के आभारी हूँ। "
"एमम एक उत्कृष्ट ठाँउ हो। शिक्षा राम्रो छ। मानिसहरू सम्मानजनक, मदतकारी र सँधै मुस्किल हुन्छन्। र तपाईंले सीपीटी र डिस्टेक्ट एजुकेशन (डे) मार्फत परिसर अध्ययन पछि समेत ज्ञानमा बढ्दै हुनुहुन्छ। DE ज्ञानको खजाना छाती हो। मलाई यो माया छ - विशेष गरी जस्तै कम्प्युटर सुरक्षा, अपरेटिङ सिस्टम्स, उन्नत सफ्टवेयर विकास, आदि "
"एमएम एक मात्र विश्वविद्यालय थियो जुन मैले मेरो मालिकको लागि आवेदन गरें। मैले अनलाइनको बारेमा पढें र तुरुन्तै प्रोग्राम संरचित तरिकाको साथ प्रेममा गिर्यो। मैले सुनेको थिएँ, र MUM को अघिल्लो र हालका विद्यार्थीहरूले जीवन परिवर्तन गरिएको प्रशंसापत्रको एक जोडी पढ्न र पढ्न सकेन र यो परिवारको भाग हुन सक्दैन।
यस कार्यक्रमले अहिलेसम्म मेरो शंकास्पदता आधारित शिक्षामा परिवर्तन गरेको छ, जुन ट्रांस्जिन्टल ध्यान प्रविधिको अभ्यास समावेश गर्दछ। म आफैले अझ राम्रो बुझ्न आएको छु, र मस्तिष्कको केहि महत्त्वपूर्ण भागहरूको भित्ता कार्य, र मेरो विचार र अनुभवहरू मेरो रोजगारीको जीवनलाई असर गर्दछ। मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो संचार कौशल र मेरो लक्ष्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमतामा सुधार गरेको छु। MUM मा शिक्षण पाठ्यक्रमहरूमा व्यावहारिक दृष्टिकोणले मेरो प्राविधिक ज्ञानलाई ठूलो हदसम्म सुधार गर्यो।
मुम्बई एक ठूलो परिवार हो जुन सबैलाई परवाह गर्दछ। विद्यार्थीहरू, संकाय र स्टाफहरूले एक स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्दछ जहाँ सबैलाई फिट गर्न सक्दछ। त्यहाँ कोहीलाई आवश्यक छ जब कोहीलाई आवश्यक पर्दछ।
म राम्रो ज्ञानको लागि आशा गर्दैछु कि मेरो ज्ञान व्यक्त गर्न र एकैचोटि बढी सिक्नुहोस्। "
"यदि तपाईं सफ्टवेयर विकास वा डाटा विज्ञान क्षेत्रमा एक महान कम्प्युटर पेशेवर बन्न चाहानुहुन्छ भने, MUM कम्प्युटर प्रोफेशनल मास्टरको कार्यक्रम तपाईंको सपना साकार पार्नको लागि उत्तम मार्ग हो।
भर्ना टोलीले तपाईलाई आवेदन प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। तपाइँ स्वागत MUM कर्मचारी द्वारा बनाईएको वातावरण मनपर्नेछ। MUM सँग शान्तिमय क्याम्पस छ। तपाईंको सबै कक्षाहरू अत्यधिक कुशल, हेरचाह गर्ने कम्प्युटर विज्ञान प्रोफेसरहरू द्वारा सिकाईन्छ। अद्भुत क्यारियर सेन्टर कर्मचारी पेशेवरहरूले तपाईंलाई अमेरिकी इंटर्नशिप बजारमा प्रवेश गर्नका लागि तयार गर्नेछन्।
"यो पहिलो पटक विदेश जाँदा, मलाई यस चरणको बारेमा धेरै चिन्ताहरू थिए, र MUM सँग मद्दत गर्ने धेरै सहयोगी र पेशेवर भर्ना कर्मचारी छन् जसले मलाई धेरै मद्दत गरे। विश्वविद्यालयमा पनि एक बहुसांस्कृतिक वातावरण छ, त्यसैले मैले विश्वभरिबाट मानिसहरूसँग सम्पर्क राख्ने अवसर पाएँ।
MUM सँग धेरै राम्रो पाठ्यक्रम संरचना छ जहाँ मैले कम्प्युटर विज्ञानमा उन्नत टेक्नोलोजीहरू सिके, जसले मलाई देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमा भुक्तान ईन्टर्नशिप प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो।
साथै MUM ले चेतना-आधारित शिक्षा प्रदान गर्दछ, त्यसैले म Transcendental ध्यान सिक्ने मौका पाएँ - एक उत्तम प्रविधि जसले तनाव हटाउन मद्दत गर्दछ, र अधिक स्पष्टता र उत्पादकताको बोध गराउँछ। "
“एमयूएम कार्यक्रमले मलाई केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बुझ्न मद्दत गर्यो जुन मेरो अभाव थियो। यो वास्तव मा तपाइँ आफ्नो क्यारियर मा प्रगति गर्न को लागी तैयार, र अमेरिकी रोजगार बजार मा सफल हुन। क्याम्पस सुरक्षित छ, र फेयरफिल्डका मानिसहरु मित्रैलो छन्। मलाई पनि संसारभरका विद्यार्थीहरूसँग अध्ययन गर्न रमाईलो लाग्थ्यो।
यहाँ आउँदा मैले गरेको उत्तम निर्णय मध्ये एक थियो। `si vous aurez cette मौका, ne la razz surtout pas !!` "
“एमयूएम ब्लक प्रणालीले मलाई एक पटकमा एउटा विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दियो – जस्तै एल्गोरिदमहरू। यसले मलाई उच्च स्तरमा इन्टर्नशिप खोजीको लागि तयार गर्यो, ताकि म अमेरिकाको पाँच शीर्ष कम्पनीहरूमध्ये एक, अमेजनबाट प्रस्ताव प्राप्त गर्न सकूँ। ”
"के MUM लाई विशेष बनाउँछ भन्ने तथ्य यो हो कि यसले एक सुरक्षित वातावरण, उत्कृष्ट फ्याकल्टी र विद्यार्थीहरू सुन्ने स्टाफ, र एक बहुसांस्कृतिक वातावरण प्रदान गर्दछ जहाँ हामी विश्वभरिका व्यक्तिहरूलाई भेट्न सक्दछौं। म भाग्यशाली छु कि एक प्रसिद्ध कम्पनी फोर्ड मोटर कम्पनी संग मेरो भुक्तानी इंटर्नशिप गर्ने ठूलो अवसर पाएको छु। "